> Resource> Video> Olee otú Mee obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ Video ngosi mmịfe
Naa onye ọ bụla hụrụ n'anya na-eziga na-enweta online ụbọchị ọmụmụ ekele, ha nile ịghọta na-ihe pụrụ iche n'ihi na ha Obi ụtọ na Birthday. Ya mere na-eme ka a ụbọchị ọmụmụ ngosi mmịfe video ga-ezi ụzọ iji gosi na ị n'ezie na-eche banyere ya / ya na Ekwekwala ka ihe anya-na-na-shelf ngwaahịa.
Ime na-akpa ọchị ụbọchị ọmụmụ video slideshows bụghị ike ma ọ bụrụ na ị nwere ikike ụbọchị ọmụmụ photos na obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ ruturu na okwu. I nwere ike inwe foto site na enyi ya na ndị ezinụlọ ya, ọ ga-abụ ezigbo echiche ma ọ bụrụ na ị na-anakọta niile ya photos na bụla ịrịba ogbo. Ya mere, n'okpuru bụ a ndu na-esi mee a ụbọchị ọmụmụ ngosi mmịfe na ihe dị mfe na-eji ụbọchị ọmụmụ video onye - Wondershare DVD ngosi mmịfe Nrụpụta.
1 Mbubata ụbọchị ọmụmụ gị foto / video
Nke mbụ niile, ẹkedori ụbọchị ọmụmụ ngosi mmịfe video onye. Na Hazie taabụ, ị nwere ike mbubata gị njikere ụbọchị ọmụmụ foto na obere vidiyo n'ime software site na Add Files bọtịnụ. Ịdọrọ & dobe foto agbamakwụkwọ na-agbanwe ha iwu egosipụta n'ime ngosi mmịfe. Na ọ bụrụ na achọrọ, ị nwekwara ike dezie dị foto / vidiyo site abụọ-ịpị foto / video thumbnails on storyboard.
Ịmepụta ụbọchị ọmụmụ foto ngosi mmịfe na music ga captivate-ege gị ntị ọzọ mfe. Ị na-atụ aro ka a ụbọchị ọmụmụ foto ngosi mmịfe site na-agbakwụnye omenala ụbọchị ọmụmụ songs. Iji mee otú ahụ, na-aga hazie taabụ na pịa Music bọtịnụ họrọ a ụbọchị ọmụmụ song faịlụ.
2 ịgbanwe mgbanwe ma ọ bụ ngagharị mmetụta maka ụbọchị ọmụmụ photos
Site ndabara, ozugbo ị mbubata foto / video, random mgbanwe mmetụta ga-etinyere-akpaghị aka. Otú ọ dị, i nwere ike ịgbanwe ha dị ka ndị a, ma tinye ngagharị mmetụta ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
The Ken-Burns (Pan / Zoom) mmetụta mee ka gị ka mbiet ndụ, na dị ka ezigbo nkiri, animated iji nweta ihe fun si ụbọchị ọmụmụ photos. Ị nwekwara ike omenala gị onwe gị ngagharị-elekwasị anya na pụrụ iche ntụpọ na ụbọchị ọmụmụ foto, na-ekwu na bithday achicha. Iji mee otú ahụ, nri pịa foto na họrọ "hazie Motion".
3 Mee DVD menu maka ụbọchị ọmụmụ video DVD
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọkụ ụbọchị ọmụmụ gị ngosi mmịfe jidesie DVD, SVCD, VCD Disc, mgbe ahụ, ọ dị mkpa iji hazi a ahaziri menu. Mgbe ịmafe Mepụta taabụ, i nwere ike ịhụ DVD menu ndebiri ke ziri ezi. N'ihi na ụbọchị ọmụmụ DVD menu template, na-aga oge ụbọchị ọmụmụ na Category ndepụta. Ị mkpa ibudata chọrọ menu template n'ihu na-eji ya.
4 Mepụta a ụbọchị ọmụmụ video ma ọ bụ ọkụ DVD
Ọ bụ oge ugbu a ike gị ụbọchị ọmụmụ ngosi mmịfe video dị iche iche formats. Ị nwere ike ịzọpụta ya na DVD diski na-ezite ya enyi gị ozugbo. Ọ na-adị nnọọ mfe, gịnị mere na-amalite na-eme ka a ụbọchị ọmụmụ video ngosi mmịfe na Wondershare DVD ngosi mmịfe Nrụpụta ugbu a! N'okpuru ebe a bụ ụbọchị ọmụmụ video ngosi mmịfe sample òkè na YouTube. Lelee ya.
Ụbọchị ọmụmụ ngosi mmịfe Songs Aro
Top 6 uchu Media andiwet Plugins maka Movie edezi
Olee otú Iji Fanye A Video n'ime PowerPoint (AVI, MP4, MOV, WMV na wdg)
Download Best 1-Pịa YouTube Downloader
Olee otú Tinye Audio ka AVI
Olee otú iji tọghata XviD / DivX ka Apple TV
VirtualDub Tutorial: Olee otú Jiri VirtualDub